Soo Iibso Aguaje Soosaarida Budada Naasaha, Badhida & Miskaha - Kordhinta Bilaashka ah & Cashuur La'aanta | WoopShop®
Aguaje Soosaarida Budada Naasaha, Badhida & Sinta Muruqyada
Aguaje Soosaarida budada Naasaha, Badhida & Sinta Mashiinka - 250g gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Tirada Goobaha: Combo
Waxyaabaha ay ka kooban tahay: budada laga soosaaray Aguaje
Lambarka Moodalka: BHJ102
Maxaa Aguaje Soosaaray budada:
Aguaje waa miro bunni ah oo leh dusha sare iyo saxarka jaallaha ah ee qoto dheer gudaha. Waa midhihii geed timireed oo ka baxa dhammaan gobollada Amazon ee Brazil iyo Peru. Aguaje waa miro aan caadi ahayn, oo ay ku jiraan inta u dhexeysa 7 illaa 12 jeer beta carotene ee karootada, taasoo ka dhigaysa ilaha dhirta dabiiciga ah ee ugu badan ee fiitamiin "A" ku jira adduunka.
Waxaa la ogyahay inay ku jiraan tiro aan la qiyaasi karin oo ah phytohormones xeryahooda dabiiciga ah ee shabaha hormoonada dumarka sida estrogen ee jirka bini'aadamka.
Khudradda Aguaje Curvy waxay si dabiici ah u dhammaystiri kartaa hormoonnadaas waxayna taageero u siin kartaa haweenka ku dhaca caadada. Sidoo kale, midhahan ayaa sidoo kale awood u leh inuu caawiyo dumarka doonaya inay waxtar ka helaan natiijooyinka hormoonada dumarka ee weyn ee jirka ku jira iyo natiijooyinka ka dhasha dabada sida dabiiciga ah u kordhaya, naaska, iyo cabirka bowdada.
Caanaha loo yaqaan 'Aguaje Powder Pure Extract' oo ah caanaha haweenka ee hormoonnada xoojiya ee suuqa ku jira, oo loogu talagalay in lagu dhiirrigeliyo badhida, naasaha, iyo bawdada si dabiici ah u kordha iyada oo aan la helin walxaha dhiirrigelinta isku-dhafan ee nooc kasta leh oo u horseedi kara waxyeellooyin xun.
Woopshop waad ku mahadsantahay adeegga
Bakhaar Weyn! Lagu taliyay
Xidhmada Wanaagsan, tayo wanaagsan, ayaa lagula taliyay
Waan ku faraxsanahay iibsigayga, mahadsanid!